Ny fanarenana ny dia, WTTC, ny firenena G-20 rehetra ary ny CEO 45 dia samy manana ny fomba fijeriny
Home » Travel Associations News » Ny fanarenana ny dia, WTTC, ny firenena G-20 rehetra ary ny CEO 45 dia samy manana ny fomba fijeriny
Oktobra 9, 2020
Fanarenana.travel, sehatra iray manerantany ho an'ny mpitarika fizahantany any amin'ny firenena 120, nanasa an'i Maribel Rodriguez, filoha lefitry ny World Travel and Tourism Council (WTTC), hanazava anio ny fomba ahafahan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany miaina amin'ny krizy virus coronavirus.
Notarihin'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneraly teo aloha an'ny UNWTO, ary Juergen Steinmetz, Mpamoakan'i eTurboNews ary mpanorina ny fananganana.travel, ny dinika 45 minitra nomanina dia naharitra 90 minitra niaraka tamin'ny fanontaniana am-polony mbola tsy tonga.
Lohahevitra mafana io, ary WTTC no nanao an'io
Ny WTTC dia nanetsiketsika ny mpikambana ao aminy ary naka CEO 45 avy amin'ireo orinasam-pitetezana sy fizahan-tany manerantany mba hiara-hiasa amin'ny lehiben'ny fanjakana sy ny minisitry ny fizahantany ao amin'ny firenena G-20.
Anisan'ireo firenena G-20 i Arzantina, Aostralia, Brezila, Kanada, Sina, France, Alemana, India, Indonezia, Italia, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the United Fanjakana, ary ny vondrona Eraopeanina.
Ny hetsika WTTC dia tohanan'ny Tompony Salman bin Abdulaziz Al Saud, Mpanjakan'ny Arabia Saodita.
Taorian'ny nanontanian'i Emmanuel Frimpong, filohan'ny Federasiona Fizahan-tany any Ghana, Raed Habbis, solontenan'ny fanarenana.travel ao Arabia Saodita, dia nanolotra ny tetikasany hampiditra tanora 1,000 amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fitarihana ary nanasa ny WTTC ho anisan'izany.
Dr. Taleb Rifai, filohan'ny mpiara-miasa amin'ny fanarenana.travel, dia nivoady hiara-hiasa amin'ny vondrona misy azy hanolotra fomba eken'ny eran-tany ny WTTC, amin'izay afaka mivoaka amin'ny feo iray ny indostria. Ny profesora Geoffrey Lipman, mpanorina ny WTTC ary ny sekretera jeneraly lefitra taloha an'ny UNWTO, dia nanome toky ny fiaraha-miasa amin'ny SunX, hetsika eran-tany tarihiny avy any Malta sy Belzika mba hahatonga ny fitsangatsanganan'ny toetr'andro ho singa ilaina amin'ny fandraisana andraikitra rehetra.
Hoy ny profesora Lipman: Ny fandraisana an-tanana dia zavatra ilaintsika hatsangana - miresaka betsaka momba izany isika. Ao amin'ny SUNxMalta dia mifantoka amin'ny Travel Friendly Travel fotsiny izahay ary manasa ny olon-drehetra hanatevin-daharana ny fisoratana anarana momba ny toetr'andro sy ny fizarana faha 2050 ao www.climatefriendly.travel. Fomba fiasa tsy andoavam-bola mankany amin'ny làlana tsy misy karbaona sy madio ary maitso io.
Juergen Steinmetz dia nanolotra fiaraha-miasa feno avy amin'i fananganana.travel hiara-miasa amin'ny WTTC amin'ny fomba mahavariana nataon'ny fikambanana. Ity fanekena fanampiana ity dia navoakan'i Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina.
Frank avy amin'ny IVdx any Indiana, Etazonia, dia nanampy hoe: Mila fitiliana amin'ny seranam-piaramanidina haingana sy marina isika. Ilaintsika koa ny mampiasa pataloha hydrophobic an'ny sivana rivotra amin'ny fiaramanidina. Mila mametraka jiro UV 222nm isika amin'ny ascenseur, lobby hotely, bisy, seranam-piaramanidina, birao fanofana fiara mba hamonoana ireo otrikaretina azo avy amin'ny rivotra. Ireto ny vahaolana vaovao hiaro ny dia. Afaka manao atrikasa momba an'io ho an'ny WTTC aho. Manana orinasa teknolojia biomedical aho.
Nanampy i Felix Chaila, lehiben'ny Birao fizahan-tany ao Zambia: Safari dia vokatra iray izay zahana lavitra ny fiaraha-monina misy risika kely ho an'ny COVID-19. Ny sidina mivantana amin'ny sidina dia fomba iray lehibe hampihenana ireo loza ateraky ny sidina tsy mivantana. Fifanakalozan-kevitra bebe kokoa no ilaina hanararaotana an'io fotoana io.
Gloria Guevara, CEO an'ny WTTC, nandefa hafatra taorian'ny hetsika: Misaotra anao tamin'ny fanohanananao tamin'ny famerenana ny sehatra! Mankasitra aho.
Jereo ny lahatsary
Malta Capital Valletta: loka ambony eran-tany 5 tsara indrindra
Ny fipoahan'ny volkano iray hafa any Islandy dia mety hiteraka korontana amin'ny fifamoivoizana amin'ny rivotra manerantany